Guud - Creativos Online | Creativos Online (Bogga 4)
Kuwani waa websaydhada 100 ee booqashooyinka ugu badan ka hela adduunka oo dhan
Degelladan ayaa adduunka xukuma maadaama ay yihiin kuwa loogu booqashada badan yahay. Waxay kala yihiin 100 madax Google, YouTube iyo Facebook. Liis aad u dhameystiran.
5 calaamadaha khamriga xiisaha leh
5 calaamadaha khamriga xiisaha leh oo leh naqshad muuqaal ah oo aad u baahan tahay inaad ogaato. Waxaan kugu martiqaadayaa inaad ku ogaato qoraalkan.
20 sano nolosha Adobe InDesign
Ururinta sawirro muujinaya safarka Adobe InDesign iyo Adobe lafteeda inala wadaagay dhammaanteen.
Facebook ayaa tijaabineysa awoodda looga saari karo waxyaabaha ay jecel yihiin qoraalada dadka kale si loo yareeyo welwelka.
Farshaxaniste wuxuu u isticmaalaa muraayad ahaan walxo ceeriin ah si uu u sameeyo sawirradiisa, oo noqda mid qaas ah oo aan adduunka ku lahayn.
Ha seegin mid ka mid ah toobiyeyaasha kumbuyuutarka ee caanka ah ee Adobe CC oo leh shaxdan
Shutterstock wuxuu ka sii daayay Adobe CC shaxdan gaaban ee shaashadda gaaban. Tusmada waxaad ka heli kartaa taas ...
Bidhaamintu waxay noqon doontaa magaca cusub ee GIMP si dhibaatada kuugu xalliso magacaaga
Muuqaalku waa isbadal u gaar ah GIMP oo leh magac kahortaga isfaham la'aanta lagu siiyay mid kamid ah barnaamijyada tafatirka ee ugu caansan.
Kani waa astaan ​​cusub oo midab leh oo Apple ah, oo hordhac u ah furaha iPhone 11
Martiqaadka munaasabadda daahfurka Apple iPhone 11 waxaa kujira astaan ​​cusub oo midabkeedu dhan yahay iyo naqshad aad u wanaagsan.
Filimkii Isbaanishka ahaa ee Buñuel oo ku jiray Labyrinth of the Turtles ayaa ku soo baxay liiska Oscas
Filimka Labyrinth of the Turtles ayaa lagu soo daray Oscars. Filim ay sameeyeen Salvador Simó iyo soo saaraha ESDIP.
Muuqaaladdii xiisaha iyo xiisaha badnaa ee McDonalds
McDonalds wuxuu soo bandhigay olole xayaysiis hal abuur leh oo uu sameeyay farshaxanka animation Braccini oo isagu abuuray GIF-yadaas.
Markaad dib uga abuurto muuqaallada buugaagtii qarniyadii dhexe oo ay ka sarreeyaan wax lala yaabo
Koox ka mid ah ardayda Czechoslovakian-ka ayaa nolol u keenay matalaadda muuqaalada yaabka leh ee buugaagta qarniyadii dhexe.
Ka abuur kamaradahaaga midabka midabka leh aaladda cusub ee Adobe Capture
Adobe Capture wuxuu helayaa cusbooneysi cusub oo kuu oggolaanaya inaad u adeegsato kamaradda si aad uga soo saarto midabbada midabbada ee kugu hareeraysan.
Iyo keegagaa loo qurxiyay sidii iyagoo lagu miiqay irbad iyo dun
Vigil waa farshaxan-yaqaan keega leh keegaggan loo qurxiyay sida haddii ay yihiin dunta. Muujinta dhabta ah ee qurxinta keega.
Xitaa xayawaankaaga xayawaanka ahi uma baahna daryeel badan sida kaarka Apple ee sida qaaska ah loogu talagalay
Waa inaanu qabannaa casharro ku saabsan sida loo daryeelo Apple Card-kaaga si uusan u soo gaadhin wax ka badan inta loo baahan yahay oo uu u ilaaliyo sidii ugu horreysay maalinta koowaad.
Markaad cuntadaada u isticmaasho alaabta ceeriin ee shuqulladaada farshaxanka
Adam Hillman waa farshaxan karti u leh inuu naga dhigo boqolaal dareemo kala duwan markaan aragno shaqadiisa farshaxanka ...
Fikrad ah astaanta calaamadda kabaha ee 'Crocs' ayaa siinaysa "muuqaal" cusub
Nooca Kabaha ee loo yaqaan 'Crocs brand brand' wuxuu umuuqdaa mid aan waligiis hore ulaheyn fikirka fikradeed ee naqshadeeye kaas oo si aad ah ugu wanaajiyay layaab badan.
Qaar ka mid ah tabaha loogu talagalay Sawirada Gacmaha by Miyuli
Miyuni waa farshaxaniste ka soo qaatay bartiisa Twitter-ka qaab muuqaal ah oo tusaalooyin ku saabsan barashada gacmaha is-qabsashada.
Naqshadeyntaan cusub ee jilayaasha Libaaxa King waxay muujineysaa dhibaatada CGI
Waxay noqon doontaa haddii aad doorbideyso waxa dhabta ah ama taabasho ka badan kartoonka. Fiidiyow animator ah oo muujinaya dhinac kale oo aad u firfircoon oo ka socda Libaaxa Boqorka ayaa CGI su'aal gelinaya.
Ka waran haddii astaamaha caanka ah ee caanka ah ee cuntada la isku daro?
Cajiib ayaa ah soo jeedintan oo noo qaadaysa isku dhafka astaamaha kala duwan ee noocyada cuntada degdegga ah si aan u aragno sida ay astaamaha ugu caansan u yihiin.
Shirkadda Jarmalka ah Shirkadda Dumarka ayaa go'aansatay inay caddeyso heerka canshuuraha badan ee ku yaal tampons-ka iyadoo loo iibinayo qaab buug ah. Ogow
Olole ka dhan ah ka tagida xoolaha ee fasaxa oo uu fuliyay Estudio Yinsen
Ololaha xayeysiinta wanaagsan waa kan si toos ah oo cad bulshada u gaadha. Taasi waa waxa istuudiyaha Yinsen uu ku gaadhay ololahan.
U rogo sawirada waraaqaha isku dhafka quruxda badan ee dhijitaalka ah
U rogo sawiradaada warqad una beddel dijitaal kana samee halabuur aan dhammaad lahayn mashaariicdaada. Waxaad siin doontaa taabasho shaqsiyeed.
Ka codso sawirrada isticmaaleyaasha kale meel kasta oo adduunka ah Looxie
Looxie waa barnaamij cusub oo ujeedadiisu tahay aqbalida codsiyada sawirada si loogu gudbiyo dadka kale ee isticmaala bog kasta.
3 talaabooyin hordhac ah oo lagu bilaabayo nashqadeynta
Ku soo dhowaanshaha naqshad ka soo xoqidda ma sahlana. Waxaan kuu sheegayaa seddexdeyda talaabooyin ee hore si aan uqaabeeyo astaan ​​kaa caawin karta bilowga shaqadaada.
Instagram iyo WhatsApp waxay heleen magac cusub
Ujeedada dib-u-habeynta ayaa la xiriirta muuqaalka astaanta Facebook ee labada Instagram iyo WhatsApp.
Marka shiilada McDonald ay u adeegaan hage mooto
Kalluumeysiga McDonald wuxuu u adeegaa hage waddo mahadsanid fikradda weyn ee ay fulisay hay'ad xayeysiin ah.
Nooca Kala-Bixinta ee 2.80 ayaa hadda la heli karaa iyada oo la cusbooneysiinayo interface iyo in ka badan
Kala-bixiyaha ku jira 2.80 wuxuu na siinayaa layaab weyn annagoo ka dhigeyna waayo-aragnimada is-dhexgalka iyo inuu la yimaado warar xiiso badan.
Behance, oo ah barxad ku habboon fanaaniinta
Behance waa shabakad bulsheed oo loogu talagalay farshaxanleyda, bandhig heer sare ah oo aad ku tusi karto shaqadaada isla markaana aad kula kulmi karto xirfadlayaal kale oo waaweyn.
Sidee u noqon laheyd rinjiyeyaasha rinjiyeyaasha caadiga ah ee dhoola cadeynaya wajiyada moodooyinka
Kawaran haddii moodooyinka ku jira sawir gacmeedyada ay dhoola caddeyn ka muuqdeen wejigooda halkii midabkaas halista ah ee cirro leh?
Sawirka cajiibka ah ee Saldhigga Hawada oo ka gudbaya Qorraxda
Saldhigga Hawada waxaa lagu qabtay sawir ku yaal Qorraxda taas oo lagu arki karo jiritaan la'aanta qorraxda.
Apple-ka cusub ee loo yaqaan 'MacBook Pro' ayaa ka qaalisan, laakiin wuxuu la imaan doonaa shaashad ballaaran
Apple waxay keeni doontaa MacBook Pro cusub bisha Oktoobar, inkasta oo qiimo sare iyo shaashad gaari doonta 17 inji.
Tokyo 2020 waxay muujineysaa billadaha in guuleystayaasha dahabka, qalinka iyo naxaasta ay guryahooda la wareegi doonaan
Japan waxay muujisay waa maxay billadaha lagu bixin doono Ciyaaraha Olimbikada ee Tokyo 2020. Hal sano ayaa hadhay.
Caltra waa aalad lagu raaco howlahaaga maalinlaha ah sida "Trello"
Caltra waa hindise kale oo lagu maareeyo yoolalkayaga shaqsiyadeed iyo shaqooyinkeenna si aan ula jaanqaadno mid kale oo caan ah sida Trello.
Slack, qalabka isgaarsiinta ee xirfadlayaasha, ayaa lagu cusbooneysiiyay cusbooneysiin ballaaran
Slack waxaa lagu cusbooneysiiyay nooca desktop-ka si aad uga hesho waxqabad wanaagsan dhinacyo badan oo ka mid ah sidaa darteedna aad u wanaajiso khibrada.
Jooji gabowga oo isku day barnaamijkan kale si aad u noqotid sawir gacmeed
Sawirada AI waxaad awoodi doontaa inaad siiso foorar wajigaaga si loogu sawiro mid ka mid ah noocyada caanka ah ee rinjiyeynta.
Khalad weyn oo ay gashay shirkadda Amazon maalintii ugu horreysay oo ku dhowaad la siinayo $ 13.000 oo kamarad ah
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ayaa awooday inay ku iibsadaan kaamirooyinka qiimo qosol leh Maalinta Koowaad ee Amazon markii ay badanaa ku kacaan in ka badan $ 13.000.
Matxafka internetka ayaa ku tusaya taariikhda bilowga iyo isbeddelka Photoshop
Booqo Matxafka Nooca si aad wax uga ogaatid taariikhda barnaamijyada, softiweerka, websaydhyada, iyo nidaamyada hawlgalka tan iyo markii ugu horraysay ee ay muuqdeen.
Emojis oo ah kanaal xayeysiin cusub?
Ford wuxuu u adeegsadaa emojis inuu yahay kanaal xayeysiis cusub, in kasta oo emoji uu kaliya muujinayo Ford Ranger oo leh midabka buluuga ah ...
Apple waxay soo celin kartaa astaanta midabbada badan si ay ula ciyaarto dareenkaaga iyo shucuurtaada
Astaamaha qaansoroobaad ee la socday astaanta Apple laga soo bilaabo 1977 ilaa 1999, waxay dib ugu laaban kartaa sannadkan 2019 dad badan oo lala yaabo.
Haddii aad sawirro ka soo dejiso Facebook, waxay la yimaadaan lambar raad raac ah
Haddii aad sawirro ka soo degsato Facebook, la soco inay ku jiraan lambar raad raac ah oo aan la ogeyn inuu jiro illaa maanta.
Telescope waa aalad daabacaad cusub oo loogu talagalay webka
Haddii aad rabto inaad ka guurto Wordpress, waxaad durba bilaabi kartaa adeegsiga Telescope, oo ah barxad cusub oo si toos ah diiradda u saareysa waxyaabaha ku jira.
Marka injineernimada la kulanto nashqadaynta warqadda
Farshaxanistu wuxuu ku muujiyaa sida kaamilnimada ah farshaxanka warqadda oo ay adag tahay in laga sooco waxa mashiinka mosaicku sameyn lahaa.
Remix 3D ugu dambayntiina waxaa laga qaadayaa Microsoft
Remix 3D wuu dhiman doonaa laga bilaabo Janaayo 2020 lagana bilaabo Ogosto mardambe 3D kumbuyuutar lagu soo daabici doono lama soo gelin doono.
Nooca Cunnooyinka degdegga ah ee Mareykanka ee KFC ayaa ololahan loogu talagalay Ruushka mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waalida badan ee la arko dhowaanahan.
Tijaabi waxaad ka ogtahay midabka su'aalahan kediska ah ee uu dhiirrigeliyey Wassily Kandinsky
Imtixaankan internetka ah ee ay qaadeen daraasad iyo Machadka Cilmi-baarista ee Getty, waxaad awoodi doontaa inaad wax badan ka barato aragtida midabka.
Luminar Cloud waxay ku xoojineysaa sawiradaada dufcado Sirdoon farshaxan ah
Luminar Cloud waa xalka ugu fiican ee dib loogu hagaajiyo daraasiin sawirro ah koox kasta oo sidaas awgeedna ay ugu diyaar garoobaan ilbiriqsiyo gudahood.
IBM wuxuu shatiyeeyay saacad isu beddelaysa kiniin
Fikradda IBM waxay tahay in smartwatch-kaaga uu noqon karo shaashad dhan oo kiniin ah si lala yaabo dad badan oo ah wax soo saar hal abuur leh.
30 mannequins oo ku yaal meelo kala duwan oo adduunka ah si ay ugu lugeeyaan dadka lugeynaya
Farshaxanistehan ayaa ina tusaya qaab kale oo aan ku fahmi karno muuqaalka magaalada iyadoo taxane mannequins ah oo lagu xujeynayo shaqaalaha markay socdaan.
Sida aan waligaa loo sameyn interface interface
Haddii aad rabto inaad ogaato sida aanad waligaa u abuurin dhex-dhexaad adeegsade, booqo websaydhka aan kula wadaagno adiga oo ka socda Creativos Online
Heerka cajiibka ah ee faahfaahinta Toy Story 4
Toy Story 4 ma lahaan doono taxane, laakiin heerkiisa faahfaahsan wuxuu ku reebay dadka deegaanka iyo shisheeyaha inay si fudud u afuufaan farshaxanimadooda.
UXPin waxay sii deysaa isdhexgal Sketch cusub oo hagaagsan
UXPin waa aalad aad u wanaagsan oo lagu dhexgalo Sketch sidaasna lagu wanaajiyo socodka shaqo ee naqshadeeye web maalintooda.
Microsoft waxay qof walba ku wareerisaa Windows 1.0 iyo horumarintiisa cusub
Windows 1.0 waa nooca loo adeegsado dhiirrigelinta Microsoft runtiina ma naqaanno sababta aan ugu laabano 80-meeyadii, Waxyaabaha Shisheeyaha ah?
Sida ay xilliyada ugu beddelaan 8dan meelood ee kala duwan
Qaar ka mid ah farshaxanleyda Australiyaanka ah ayaa abuuray 8han halabuur oo muujinaya marxaladaha xilliyada ee maraya meelo kala duwan.
MIT-ka waxay ku soo saareen Sirdoon Artifishal ah oo awood u leh inuu meesha ka saaro isla markaana waxyaabaha ku jira u dhigo muuqaallo macquul ah oo lala yaabo.
Kate Kyehyun Park waxay kugu baraysaa seddex talaabo sida loo sawiro loona rinjiyeeyo ubaxyo qurxoon oo aad hadiyad fiican ugu sameyn karto qof.
Waxaad kala soo bixi kartaa 4 nooc oo ka mid ah 72 nooc oo bilaash ah si aad u hesho nooc qurxoon oo nooc badan leh. Magaciisu waa Nuux waadna tijaabin kartaa.
Naqshadeeye awood u yeeshay inuu hindiso qaar ka mid ah wax soo saarka teknoolojiyadda ee sida ugu badan u beddelay isirka aadanaha tobannaan sano.
Sidan ayaa Google u qaabeeysay mawduuca madoow ee dhowr barnaamijyadooda Android ah
Tani waa sida Google u muujiyo sida uu u qaabeeyey mawduuca mugdiga ah ee 4 ka mid ah barnaamijyadiisa ugu caansan. Qaar ka badan xeerarka naqshadeynta xiisaha leh.
Gawaarida loo yaqaan 'Vans' ee ay dhiirrigelisay rinji-yahanka halyeeyga ah Frida Kahlo
Vans waxay rabtay inay sharfto fanaanada reer Mexico Frida Kahlo oo leh seddex moodel oo ah kabo isboorti aad u farshaxan sanadkaan 2019.
Kursiga ugu fiican ee loogu talagalay taageerayaasha Star Wars
Kuraastan ku saleysan dagaalyahannada 'Star Wars TIE', naqshadeeyaha reer Filibiin ee Kenneth Cobonpue wuxuu caan ku noqon doonaa taageerayaasha.
Haddii aad raadineyso naqshadeeyayaal ku dhiirrigeliya, afartan ka socda Instagram, iyo kuwa taabta qaybaha kala duwan, ayaa u qalmi doona xilliyadaas abaarta.
App xiiso leh oo aan kuu soo bandhigno si aad ugu qortid shaashadda ama tab biraawsarka kadibna aad u soo dejiso fiidiyaha
Screenzy waa barnaamij app ah oo kuu ogolaanaya inaad ku horumariso dhamaan sawirada aad ku qaadatay kombuyutarkaaga ka dibna waxaad dooneysaa inaad ku soo bandhigto qaab aad u qurux badan.
Camera Raw bilowga ah
Waxaan kuu sheegeynaa howlaha kaamirada ceeriin qaab fudud oo waxtar leh oo aad si dhaqso leh oo fudud ugu tafatirto sawirada sida xirfadle.
Websaydhyada ugu fiican ee lagu raadsado dhiirrigelinta
Websaydhyo ka wanaagsan si kor loogu qaado hal-abuurkaaga oo loo helo dhiirrigelinta aad u baahan tahay si aad naqshadahaaga uga dhigto mid gaar ah oo ay ku raran yihiin tixraacyo
ArtRage 6 wuxuu yimid iyadoo loogu talagalay in lagu bixiyo khibrad rinjiyeyn dhab ah
ArtRage 6 wuxuu la yimaadaa ujeedooyin cad oo ah inuu noqdo aaladda runti kudayanaysa khibraddaas gaarka ah ee aan haysanno ...
Ka saar qof (ama wax) sawir leh Photoshop
Baro hab aad u dhakhso badan oo fudud oo aad ku tirtiri karto qof ama wax sawiradaada leh Photoshop adiga oo aan aqoon hore u lahayn sida xirfadle
Marka laba astaamood ay iskaga mid yihiin waxyaabo badan sida kiiska Calibra iyo Current
Shirkad isku mid ah ayaa naqshadeysay laba astaamood oo loogu talagalay Calibra iyo Current waana si isku mid ah marka laga reebo faahfaahin ka yar tan kale.
Farshaxanada reer Japan waxay dib u sawiraan wadamada iyo calamadooda sida astaamaha anime
Farshaxanno kala duwan oo reer Japan ah ayaa abuuray taxane jilayaal anime ah oo ku saleysan calammada iyo waddamada ka qeyb galaya Tokyo 2020 Olympics.
Baro sida kumbuyuutar ahaan loogu sameeyo Photoshop oo leh natiijooyin mihnadeed adigoon aqoon hore u lahayn Photoshop. Ku habboon naqshadayaasha bilowga ah!
Ka soo gal sawirro fara badan oo ka bannaan meesha mahadnaqa NASA
Haddii aad ku jirto sawir qaadista hawada sare, ma dhaafi kartid websaydhka NASA oo aad ka heli karto dukumiintiyo muhiim ah iyo sawirro.
Daabacaadda Affinity waxay noqoneysaa beddel muhiim ah oo ka badan isla kan Adobe isla markaana waxay la imaaneysaa muuqaal gaar ah.
Serif wuxuu ku dhawaaqay bilowga daabacaadda Affinity Publisher muuqaal aad u wanaagsan oo gaar ah: udhaxeeya Sawirka, Daabacaha iyo Naqshadeynta hal guji.
Hadda waad iska hilmaami kartaa iibsiga beytarro badan Stylus-kaaga oo wata Bamboo cusub oo loo yaqaan 'Bamboo Ink Plus', oo loo heli karo 99 euro dukaanka Wacom.
'O' wuu ka baaba'aa calaamadda 'Oreo' qof walbana wuu la yaaban yahay
Oreo waxay qaadatay dadaal aad uga muhiimsan maalinta noocan oo kale ah ee deeq bixiyaasha Dhiiga. Wax walba oo ka yimid gacanta Laanqayrta Cas.
Elon Musk wuxuu leeyahay siinta sumcadda fanaaniinta barta Twitter-ka ayaa baabi'ineysa aaladda
Elon Musk ma uusan dooneynin inuu ku ammaano shaqada farshaxanimada farshaxanistaha. Mid wanaagsan ayaa lagu qasbay iyadoo la bixinayo sharraxaad aan cidina fahmin.
Sida loo xumeeyo dhulka sawirka Photoshop
Haddii aad u baahan tahay qoto dheer oo muuqaal ah, taas oo ah, in la ballaariyo dabaqyada iyo derbiyada si loo waafajiyo naqshadeyntaada, ha ka welwelin, waxaan ku tusi doonaa sida. Waan bilownay!
Documentary-ga '10 sano ee Hayao Miyazaki 'wuxuu shaqsi ahaan ku tusayaa agaasimaha Ruuxay Away
'10 sano oo lala joogo Hayao Miyazaki 'waa dukumiinti garaaf iyo dhawaq leh oo tayo sare leh oo laga dheehan karo waxa ku jira iyo waliba inuu na tuso halyeeyada.
Kani waa naqshadaynta barnaamijka 'Spotify' si loo xoojiyo Podcasts
Spotify ma rabto in laga tago, iyo ka dib dadaalka ay qaadatay Apple, hadda waxay daabacdaa nooca keena dib u habeynta barnaamijkeeda.
Tung Ming-Chin waa farshaxaniste reer Taiwan ah oo ujeedadiisa qoto dheer ka dhigaya inuu ku caddeeyo farshaxankiisa alwaax. Waxay ka tagaysaa cidna dan ka lahayn.
Angela Moulton waxaa dabeecad u leh inay sameyso sawir gacmeedyada saliida leh ee shimbiraha waxayna ku shaqeysaa burush waaweyn.
Burushyada Adobe Fresco waxay noqon doonaan kuwo caqli gal ah si loogu ekeysiiyo saliida iyo midabbada ku jirta shiraac dijitaal ah. Marka hore Apple iPad.
Golaha Magaalada Madrid wuxuu diyaar u yahay dhammaan boodhadhka qurxiyey magaalada ilaa 2016
Golaha Magaalada Madrid ayaa sameeyay degel si aad u soo dejiso dhammaan boodhadhka loogu talagalay 2016 illaa 2019 ee xallinta ugu badan.
Milkshake inuu degel ku yeesho daqiiqado gudahood una diyaar garoobo astaantaada 'Instagram'
Milkshake waa aalad cusub oo lagu abuuro degello internet laguna xoojiyo dhammaan kuwa aan khibradda u lahayn abuuristooda.
Barashada masters-ka naqshadeynta jawaabta ee suuqgeynta emaylka iyo bogagga degitaanka
Waxaan ku baranaynaa qaar ka mid ah sayidyadoodii abuurka bogagga soo degitaanka iyo suuqgeynta iimaylka jawaabta leh oo markaa la jaanqaadi kara qalab kasta.
30 Bogag Websaydh ah oo aad u fudud
Isku-duwidda Cajiibka ah ee 30 Bogagga Websaydhka ee cajiibka ah
Kuwani waa midabada isbeddelka cimilada sida ku cad Adobe iyo Pantone
Hadafka Adobe oo leh seddexdan midab waa inuu ku baaqo wacyigelinta isbeddelka cimilada iyo saameynta adduunkeena.
Naqshadeeyaha Affinity iyo Sawirku wuxuu helaa cusbooneysiinta ugu weyn ilaa taariikhda
Waxaa la dhihi karaa cusbooneysiinta ugu weyn ee ay heleen labada Naqshadeeye Affinity iyo Sawirka Affinity illaa maanta. Ha ka daahin ballanta.
Kani waa Apple Pro Mac cusub
Mac Pro-ka cusubi wuxuu ka soo baxaa cudud iyo lug, laakiin taa badalkeeda waxaad heleysaa kombiyuutar qaab-dhismeedkiisu aad u sarreeyo oo leh qalab awood badan leh.
Bokeh, ama maxaa noqon kara Instagram-ka soo socda oo diirada saaraya asturnaanta
Haddii aad raadineyso shabakad bulsheed oo diirada saareysa asturnaanta, tani waxay noqon kartaa Bokeh, in kastoo ay tahay inaad bil walba iska bixiso.
Marco Melgrati iyo sawiradiisa muhiimka ah ee maalmaha na taabanaya
Farshaxanistaha reer Talyaani ayaa dhagxiyey Melgrati iyo inaad ka heli karto bartiisa Instagram si aad u aragto shaqooyin badan oo farshaxanimo ah.
Asus 'kacaan iyo muujinta sharad abuurka: laptop laba-shaashad ah
Asus ZenBook Duo waa laptop aad u qurux badan oo kacdoon ka sameyn kara sidaan u fahansanahay aaladaha taxanaha ah.
Adobe ayaa bilaabaya Premiere Rush on Android si wax looga beddelo loona abuuro fiidiyowyo mobilkaaga
Waxaan u baahanahay dhowr bilood oo aan sugno si aan u awoodno inaan ku rakibno app-ka cusub ee Adobe Premiere Rush oo loogu talagalay wax ka beddelka fiidiyaha mobilada Android.
Ayaa noo sheegi lahaa in maalin uun aan heli doonno aragtidan Mickey Mouse
Sawir gacmeedka Mickey Mouse oo laga soo hindisay muuqaalka kore ayaa lagu arkay akoon Twitter ah oo dad badan la yaaban.
Adobe wuxuu ka digayaa: hadaad isticmaasho Photoshop hore waa lagaa dacwayn karaa
Adobe ma doonayo qofna inuu adeegsado nooc duug ah oo barnaamijyadiisa ah inuu adeegsado, markaa waxay dacweyn doontaa qof kasta oo adeegsada.
Adobe wuxuu raadiyaa tijaabiyayaal si ay ugu tijaabiyaan Photoshop CC-ga iPad-ka
Adobe wuxuu raadinayaa tijaabiyayaal tijaabiya waayo-aragnimada Photoshop CC ee ku saabsan iPad-ka iyo cidda barnaamijka desktop-ka u keenaya kiniin.
Xogtani waxay ku tusinaysaa dhammaan beddelaadaha barnaamij kasta oo Adobe Creative Cloud ah
Sawir gacmeedkan oo ay soo bandhigeen sawir qaade dijital ah ayaa muujinaya dhammaan waxyaabaha lagu beddeli karo dhammaan barnaamijyada Adobe Creative Cloud
Adobe wuxuu cusbooneysiiyaa qalabkiisa midabaynta palette webka loo yaqaan Adobe Color
Haddii aad raadineyso midab dooriya midab otomaatig ah, waxaad horey ugu laheyd Adobe Color ikhtiyaarka aad ku isticmaali karto Pantone's si aad u qeexdo.
Shirkadda Coca-Cola ayaa soo saartay xayeysiin cusub oo si toos ah u kicin doonta xusuusta dareenka ee malaayiin qof oo adduunka ah.
Xaqaas waad u aqrisay, aaladani kaliya nama ogolaaneeyso inaan saxno sawirada. Waxay leedahay fursado badan oo ay tahay inaad soo ogaato. Tafatiri fiidiyowyadaada!
Dhaleeceyn badan oo uu helay trailer-kii Sonic the Hedgehog ee uu sii daayay Talaadadii la soo dhaafay taasna waxay ku kaliftay inuu go'aankaas gaaro.
Naqshadeynta daboolka ebook suuq geyn ah
Sameynta ebook waxay u noqon kartaa istaraatiijiyad suuqgeyn wanaagsan macaamiishaada si ay si fiican ugu bartaan badeecooyinkaaga iyo adeegyadaada.
Aperture waa la waayi doonaa imaatinka Mojave, nooca cusub ee macOS ee noo sahli doona inaan helno Sawirada Apple.
Ma ogtahay inaad abuuri karto walxaha 3D? Photoshop wuxuu kuu ogolaanayaa inaad waxyaalo yaab leh si dhakhso leh u qabato, si fudud oo aanad aqoon sare u lahayn aaladda
Adobe wuxuu muujinayaa khiyaano cusub oo hal-gujin midabaynta Sawirka
Muujiye (Sawir-qaade) waxaad dhawaan awoodi doontaa inaad adeegsato hal guji si aad midab ugu wada dhigto dhammaan astaamaha sawirrada oo leh qaabab adag. Waqti badbaadi.
Sawir qaade ayaa kashifaya kuwii ka dambeeyay dhacdooyinka qabashada daqiiqadahaas sixirka ah ee 'Instagram'
Sawir qaade ayaa soo bandhigaya hal-abuurnimada iyo tabaha uu adeegsado si uu u helo sawiradaas oo badanaa malaayiin qof ku qabsada barta Instagram.
Waa maxay Sheeko Sheeko iyo sida loogu adeegsado Naqshadeynta
Sheeko xayeysiinta ayaa ah istiraatiijiyad suuq-geyn ah oo ay adeegsadaan noocyo si loo abuuro isku xirnaan weyn iyo u damqasho macaamilka
Meel xun waa bangi cusub oo tayo sare leh oo furan
Haddii aad raadineyso buugga cusub ee tayada sawirrada furan ee furan, kani wuxuu noqon karaa midka ka yimaada Meesha xun. Xullo hadba midabka ugu badan.
Xullo oo isku dar noocyada sumaddaada
Waxaan kuu sharxeynaa sida loo doorto loona isu geeyo noocyada astaanta aqoonsigaaga garaafka dhowr talaabo oo fudud.
Netlfix wuxuu leeyahay taxane loogu talagalay hal-abuurka
Ma jeceshahay taxane? On Netflix waxay ku soo bandhigayaan taxane dokumenti ah oo ka mid ah farshaxanada ugu wanaagsan ee farsamooyin kala duwan ay ka muuqdaan.
Sida loo calaamadiyo astaamaha qoryaha adoo adeegsanaya Photoshop
Xaqiiqdii in kabadan hal jeer ayaad aragtay sawirro astaamo lagu xardhay alwaax. Waxaan ku tuseynaa sida loo sameeyo Photoshop talaabo talaabo ah.
Naqshadeynta qaabdhismeedka Scandinavian style: ku dhiirrigeli mashaariicdaada soo socda
"In yar ayaa ka badan" Sida loo hubiyo sida weedhan noogu muuqato, waa tilmaanta ugu wanaagsan ee aan ku siin karno Naqshad-qaabeedka Scandinavia.
Sida loo doorto midabka midabka saxda ah ee astaantaada
Midabada midabka ee garaafka garashada astaanta waa inay lahaataa 4 illaa 5 midab. Waa inay noqdaan indho-qabad ayna qabtaan shakhsiyadda astaanta.
Baakadaha cusub ee Heineken si ay ugu dhejiso qoraalka waxyaabaha ugu caansan
Haatan xiddigga cas ee Heineken wuxuu noqonayaa halyeeyga dib-u-naqshadeynta naqshadeynta baakadaha nooca Dutch-ka ah.
U Samee Sawirro Pinterest Sawirkaaga Taagan
Haddii aad ku dhiirrigelinaysid balooggaaga ama astaantaada shirkadda Pinterest, waa inaad sameysaa sawirro muuqaal ah oo muuqda. Baro sida adoo raacaya mabaadi'da aasaasiga ah.
Ugu dambeyntii wuxuu yimaadaa aaladda qoraalka si loogu Kordhiyo iPad-kaaga
Haddii aad leedahay Procreate, hadda waad rakibi kartaa nooca cusub ee kuu oggolaanaya inaad marin ugu hesho aaladda qoraalka cusub oo sidaasna ku illaawdo dhinacyada saddexaad.
In lagu faahfaahiyo naqshadeyntayada: isku toosin oo qaybi
Baro xeeladaha qaarkood si aad uhesho saxnaanta weyn ee udhaxeysa cunsurrada. Waa muhiim in wax waliba xuddun u yihiin isla markaana sanduuq iskula jiraan.
Naqshadeynta iyo Daabac Buug Adoo Isticmaalaya Amazon KDP
Amazon KDP waa madal loogu talagalay daabacaadda iyo iibinta buugaagta. Wax ka baro qalabka ay bixiso iyo sida aad ula macaamili karto nashqadeynta iyo tafatirka barxadda.
5 qalab oo kaa caawinaya inaad aqoonsato ilaha
Marar badan ayay nagu dhacdaa inaan aragno noocyada farta aan jecel nahay laakiin garan mayno waxay yihiin. Halkan waxaan kuugu soo bandhigeynaa 5 qalab oo si fudud loogu aqoonsan karo.
IKEA ayaa dib u naqshadeynaysa astaanteeda, in kasta oo aan lahayn astaamo badan oo cusub illaa kii ka horreeyay ee 1992
IKEA waxay soo bandhigtay astaanteeda cusub oo ay ku jiraan sheekoyin yar yar marka loo barbar dhigo tii ka horeysay ee la abaabulay 1992.
Kudar animations si aad uhesho sawirrada aad ku dhejiso barta 'Instagram' ee 'Scribbl'
Waad ku mahadsan tahay Scribbl waxaad ku dari kartaa animations sawirrada aad soo geliso Instagram. Waxay leedahay labadaba qaab-dhismeedka caadiga ah iyo awoodda lagu abuuri karo.
Abuur guddi niyadda si aad u naqshadeyso garaafka muuqaalka astaanta
Haddii aan qorsheyneyno aqoonsi muuqaal ah, waxaan adeegsan karnaa loox 'Mood' ah oo noo oggolaanaya inaan u gudbinno fikradaha aan maskaxda ku hayno. Waa wax aad u fudud in la sameeyo!
Ka hel farshaxanka pixel-ka ugu fiican gacanta Konami kulankiisa cusub
Farshaxanka Pixel ayaa ku jira moodada oo Konami ayaa haatan na tusaysa ciyaarteeda cusub ee loo yaqaan 'Pixel Puzzle Collection' si loo ogaado astaamaheeda sheekooyinka ah.
Sidee loo diraa bucshiradda buug si aad u riixdo
Si aad ugu dirto xuubka buugga si aad u cadaadiso waa inaad tixgelisaa tixgelinno taxane ah markaad kaydinaysid. Halkan waxaan kuugu sharxi doonaa sida loo sameeyo.
Adobe wuxuu ku barayaa sida walxaha looga soo saaro fiidiyowyada leh 'After Effects'
Cusbooneysiinta cusub ee 'After Effects' waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud uga saarto walxaha dhammaan fiidiyowyadaas aad rabto inaad wax ka beddesho.
Sida loo sameeyo jaldi buug si aad ugu dirto daabacaadda
Sideed u habaynaysaa jeldiga buug si loo daabaco? Waxaan ku sharaxeynaa qaab fudud dhamaan tillaabooyinka si aad uhesho farshaxan kama dambeys ah qalad la'aan.
Midab leh oo aan ixtiraam lahayn: Memphis Design wuxuu ku soo laabtay isbeddel ahaan
Midabyo adag, qaababka tirooyinka soo noqnoqda iyo walxaha ku jira qaabka Farshaxanka Farshaxanka, ayaa ah qaar ka mid ah astaamaha lagu garto Naqshadda Memphis.
Zipi iyo Zape waxay ku noqdeen layaab qof walba
4-ta Abriil waxay noqon doontaa maalinta aad kuheli karto majaajilo Zipi iyo Zape oo sheekooyinkooda gebi ahaanba maanta dib loo cusbooneysiiyay.
Naqshadda gaarka ah ee Kaarka Apple
Apple waxay cadeysay inay jeceshahay nashqadeynta wanaagsan marka aan arki karno Kaarka Apple oo ay ku yartahay sameynta titanium.
Raadi shaqadaada xiga ee fog adoo hal abuur leh foghub
Haddii aad tahay xirfadle hal abuur leh, 'remotehub' waxaad ka heli kartaa shaqo aad kaga shaqeyso guriga oo sidaas darteed kor ugu qaado xirfaddaada xirfadeed.
Google wuxuu badalayaa koorsada qaabeynta astaamaha Stadia, oo ah adeegsiga socodsiinta ciyaarta
Stadia waa adeeg ugub ah oo u eg Netflix-ka ciyaar qulqulaya oo lagu garto astaan ​​si fiican loo qaabeeyey, inkasta oo ay badhideedu tahay.
NVIDIA's cusub AI wuxuu u rogi karaa sawir gacmeed fudud farshaxan heer sare ah oo sawir qaade ah
Si fudud u sixir waxa NVIDIA u abuurey si loo abuuro muuqaallo muuqaal macquul ah oo sawiro fudud ah oo la sawiray iyadoon aqoon badan u lahayn sawir qaadista.
New iPad Air iyo Mini oo leh qalin qalin Apple ah
Haddii aad taageere u tahay qalinka Apple, waxaad ku isticmaali kartaa qalab kale oo ay maanta soo bandhigtay sumcadda caanka ah ee Mareykanka.
Boqortooyada, waa daar Australiya ah meesha laga helo dhiirigelin
Waxyigu wuxuu ka yimid Australiya oo mideynaya farshaxanka derbiga ee farshaxanka waddada Rone iyo madadaalada qurxinta qurxinta gudaha.
Ugu dambayntiina CorelDRAW wuxuu u yimaadaa Mac; mar dambe kuma xirna Windows
Corel waxay maalmahan ka hor soo bandhigtay CorelDRAW oo ku saabsan Mac iyo maxaa cusub .app loogu talagalay webka si ay ula wadaagaan shaqooyinka iyo waxyaabo kale oo badan
Rinjiyeynta xayawaanka sameynaya yoga, waxaa qoray Bruno Pontiroli
Bruno Pontiroli wuxuu diidan yahay culeyska iyo dabacsanaanta xayawaannada ku jira sawiradan xiisaha leh iyo kuwa layaabka leh ee xayawaanku ku sameeyaan yoga.
La wadaag faylasha waaweyn Firefox Send, sharadka cusub ee Mozilla
Haddii aad rabto inaad la wadaagto faylasha waaweyn macaamiisha, waxaad horey u laheyd Firefox Send from Mozilla, oo ah adeeg cusub oo leh 1GB oo la soo dejinayo oo aan lahayn koontada Firefox.
Twitter waxay cusbooneysiisaa astaanteeda, laakiin iyada oo aan lahayn halyeeyadeeda ugu weyn: shimbirteeda
Twitter wuxuu doonayaa inuu siiyo beddel hawo ah waayo-aragnimada la siiyay iyo inuu arko, waxay shimbiraha ka saaraysaa astaanta barnaamijkeeda moobiilka.
150.000 oo sawir si loo muujiyo midabada qarsoon ee dayaxa
Sawir muujinaya khariidada juqraafiyeed ee dayaxa waana shaqada xigta ee sawir-qaade kaas oo naga yaabiyay dhawaan.
Photopea, oo ah ka bedelka khadka tooska ah ee Photoshop-ka
Waxaan soo bandhigayaa Photopea, oo ah codsi bilaash ah oo khadka tooska ah noo saamaxaya inaan wax ka bedelno oo aan ku abuurnno sawirro aalado aad ugu eg kuwa Photoshop ay adeegsadaan.
Pantone wuxuu soo saarayaa noocyo cusub oo midabbo macdan ah loogu talagalay baakadaha, sumadda iyo suuqgeynta
Noocyo cusub oo midab bir ah oo ka sameysan Pantone ayaa diiradda saaray baakadaha, suuqgeynta iyo sumadda iyo in aad ka iibsan karto maanta.
Sida loo waafajiyo qoraalka maqaalka qaabka sawirka
Casharradan fudud waxaad ku baran doontaa sida loo waafajiyo qoraalka maqaal ee sawir si loo abuuro is waafajin muuqaal ah iyo maqaallo soo jiidasho leh.
Naqshadeynta dabeecadda cusub ee Sonic the Hedgehog waxay dejineysaa shabakado dabka leh dhaleeceyn
Waxaa lagu hubeeyaa shabakadaha boqolaal taageerayaal ah oo dhaleeceynaya dabeecad la'aanta Sonic cusub ee loogu talagalay filimka soo bixi doona bisha November.
Da 'yar farshaxan yahan Isbaanish ah ayaa si sharaf leh dib u soo saaray saddex ka mid ah imbaraadoorradii Roomaanka ee ugu caansanaa Rome. Shaqo weyn.
Wax-soosaarka Hal-abuurka ah si loo ilaaliyo shaqooyinkaaga oo aad awood ugu yeelato inaad u adeegsato kuwa qorayaasha kale dhibaatooyin sharci la'aan. Soo hel dhammaan faa'iidooyinkiisa!
Dhamaadka Ciyaarta Carshigu waa halkaan xilli ciyaareedkii sideedaad waxayna noqon doontaa tii ugu xiisaha badneyd ee aan arki karno waqti dheer. Boodhadhka aan kuu gudbinayno.
Abuur farshaxan pop in yar oo talaabooyin fudud ah
Farshaxanka Farshaxanka waa qaab aad loo jecel yahay oo naqshadeynta ah. Baro sida loo abuuro adiga kuu gaar ah Sawirada Farshaxanka Farshaxan ee casharradan fudud.
Isbeddelo badan oo ku saabsan astaanta 'Slack': markan asalka cad
Slack wuxuu mar kale badalay astaantiisa, inkasta oo markan maxay tahay astaanta aan ku arki karno aaladaha mobilada.
Abuuritaanka Sawiro Aan Macquul Ahayn Oo Muujinaya Xayawaanka Marka Aan Dadku Eegayn
Farshaxanistahan Faransiiska ah wuxuu muujinayaa xilliyadaas ugu dhow ee xayawaanka duurjoogta ah ee ka socda qaarad sida Afrika oo kale ah. Sawir dib loo soo ceshay
Sida loo hagaajiyo qaabeynta astaamahaaga
Waxaan kuu sheegeynaa maxay yihiin mabaadi'da aasaasiga ah ee qaabeynta dabeecadda oo kaa caawin doonta inaad sameysid naqshado soo jiidasho leh oo xiiso leh.
Bao wuxuu helayaa Oscar-ka 2019 ee loogu tala galay Short Animated Short
Bao wuxuu ku saabsan yahay hooyo keli ah oo Shiineys ah oo la ildaran xanuunka buulkeeda. Tayo tayo sare leh oo aad u gaaban oo ka timid Pixar.
Macaanida iyo midabka sawirada Pascal Campion
Pascal Campion wuxuu inaga kaxeeyaa adduunkiisa midabkiisa iyo waxyaabaha maalinlaha ah. Qoyskiisa iyo gurigiisa ayaa ah isha uu maalin walba ka helo waxyi.
Baro sida loo abuuro saameynta Polaroid ee InDesign
Saamaynta Polaroid waxay ka kooban tahay tafatirka sawir si aad ugu ekaato dhowr Polaroids. Baro sida loo sameeyo casharradan.
Tani waa astaanta cusub ee Paris oo leh xidido taariikhi ah oo qoto dheer
Hay'adda Carré Nois ayaa mas'uul ka ahayd sameynta astaanta muujineysa markabka si loo aqoonsado magaalada Paris.
Furayaasha si looga gudbo dhisme hal abuur leh
Dhamaanteen waan la dhibtoonay hal abuurka mararka qaarkood. Maanta waxaan kuu keenayaa dhowr farsamooyin si aad uga gudubto oo aad shaqo u hesho.
Adobe Photoshop wuxuu helaa abaalmarintiisii ​​ugu horreysay ee Akadeemiyadeed
In Adobe Photoshop uu helo Oscar waa wax lala yaabo, laakiin haddii aan ogaanno waxa qalabkani uga dhigan yahay warshadaha, hubaal lama yaabi doono.
Abuur boodhadh leh ubax iyo qaab qorid
Baro sida loo sameeyo habeyn ubax ah Adobe Illustrator, naqshadeynta noocan oo kale ah ayaa moodada sannadihii la soo dhaafay ugu mahadcelisay naqshadayaasha sida Aless Baylis.
Websaydhkani wuxuu soo saaraa wejiyada dadka aan u kala sooc lahayn
Websaydh ayaa mas'uul ka ah soo saarista wajiyo aan kala sooc lahayn oo ah dadka aan jirin iyada oo ay ugu wacan tahay caawimaadda Sirdoonka Cilmiga ah iyo shabakadda neerfaha.
Ku hel tafatiraha fiidiyowga tooska ah ee fiidiyowga oo bilaash ah oo leh FlexClip
FlexClip waxaa lagu gartaa inuu yahay tifaftire fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah oo gebi ahaanba bilaash ah oo hadda ku jira beta.
Mastercard wuxuu soosaaray fiidiyow aan ku arki karno astaamaha maqalka ee shirkada u heellan deynta iyo kaararka deynta.
Kheyraadka sawirku waa u muhiim mashruuc kasta. Ha ka quusan tayada wanaagsan oo akhri. Bangiga Sawirka Bilaashka ah!
Waxaa jira tiro wanaagsan oo mawduucyada rasmiga ah ee Chrome laftiisa oo dhowaan la daabacay oo maareeya in loo habeeyo biraawsarka webka.
Koorsooyinka ugu fiican ee sawir qaadista oo leh qiimo dhimis fiican
Miyaad jeceshahay sawir qaadista oo aad dooneysaa inaad barato sida sawir wanaagsan loo qaado? Ka faa'iideyso xirmadan oo leh 21 koorso qiimaha hal. Miyaad seegaysaa?
Kuwani waa emojis cusub oo ku yimaada cusbooneysiinta Unicode 2019
Emojis la'aan, wada sheekaysigu isku mid ma noqon doono, sidaa darteed imaatinka tiro aad u tiro badan ayaa ka buuxin doonta wadahadalladaas internetka midab iyo noocyo badan.
Ku tijaabi heerka aqoontaada ee ku saabsan UI ciyaartaan khadka tooska ah
Ciyaar xiiso leh oo xiiso leh oo loo yaqaan 'Can´t Unsee' taas oo aan ku hubin karno heerka aqoonta ee naqshadeynta UX.
Hadda waxaad ka beddeli kartaa cabbirka calaamadda ku taal Adobe Photoshop Express
Mid ka mid ah ayaa ah suurtagalnimada in dib loo qiyaaso cabbirka astaanta aaladda Adobe Photoshop Express ee loogu talagalay Android.
Abuuritaanka majaajillo majaajilo ah barta ugu hooseysa ee xirfadda hal-abuurka farshaxanka
Farshaxanistehan ayaa ina tusaya halka ay dhiirrigelintu ka timid in la abuuro CubeMelt, oo ah baraf baraf leh oo uu ku sameeyay 33 majaajilo.
Kirby Jenner wuxuu sii wadaa inuu isku muujiyo shaqsiyaadka caanka ah iyo moodooyinka sida ugu wanaagsan ee ugu macquulsan
Kirby Jenner waa saaxir Photoshop wuxuuna awood u leeyahay inuu shukaansado dad badan oo caan ah mahadnaqa sawirkiisa fiican ee dib u hagaajinta.
Sawir qaade Ingriis ah wuxuu sawiray 100 baararka magaalada Madrid
Wejiga ugu weyn ee 100 baararka magaalada Madrid waxaa ku sawiray sawir qaade Ingiriis ah. Meel loogu talagalay xusuusta baararka qoyska.
Astaanta cusub ee Zara
Xilliga xagaaga-xagaaga ee Zara ma ahan oo keliya inuu na keenay ururinta cusub, laakiin sidoo kale isbeddelka ...
Lixda qaybood ee ugu waaweyn qaabaynta dabeecadda
Waxaan kuu sheegeynaa waxa ay yihiin qaababka kala duwan ee aad u qaabeyn karto jilayaashaaga iyo astaamahooda, tusaalooyinka jilayaasha caanka ah si aad u ogaatid sida loo kala saaro.
Adobe wuxuu helaa Allegorithmic, oo ah shirkadda hogaamineysa 3D tafatirka ciyaaraha, filimada iyo waxyaabo kaloo badan
Allegorithmic waa halbeeg laga barto adduunka ciyaaraha iyo madadaalada. Adobe wuxuu rabaa inuu u qaado dhammaan qaybaha naqshadeynta.
Istuudiyaha waa la cusbooneysiiyay si aad u sameyso noocyo fiican
Istuudiyaha wuxuu kuu oggolaanayaa inaad tusaalayso boggagaaga cusub ama barnaamijyadooda, iyo sidoo kale inaad isla markiiba u daabacdo. Xal weyn.
Dufcadda dib u habeynta sawirada si bilaash ah (2 maalmood) leh Assetizr
Kuweena ka shaqeeya shabakadaha bulshada, naqshadeynta iyo sawirada, waxaan u baahanahay barnaamijyo badan, sida ...
Slack wuxuu soo bandhigayaa astaan ​​cusub oo midabkiisu ka buuxo iyada oo aan la ilaawin nuxurka ay leedahay
Slack waa aalad isgaarsiineed oo muhiim u ah maanta isbedelkaas dijitaalka ah ee shirkado iyo shirkado badani u baahan yihiin oo dalbadaan.
Waxaan ku tusineynaa sida loogu xiro Wacom Cintiq Pro 13 iyo 16 adoo adeegsanaya HDMI adoo adeegsanaya adabtarada Wacom Link oo hada la jaan qaadaya kiniiniyadaan.
Duolingo wuxuu dib u naqshadeeyey xayawaankaaga si aad uga dhigto wax la jeclaan karo haddii ay suurtagal tahay
Duolingo waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee luuqad lagu barto waana inaan ku ciyaarnaa si aan wax walba ugu qanco.
Sawirada cajiibka ah ee faahfaahsan ee Kamalky Laureano
Rinjiyeyste dhammaystiran oo si faahfaahsan u qaadanaya qaab-dhismeedka heerka ugu sarreeya si loo soo saaro shaqooyinka diirimaadka weyn ee aadanaha
Wacom waxay soo bandhigeysaa Cintiq cusub oo diyaar u ah dhalinyarada farshaxanka iyo naqshadeynta
Haddii aad xirfadle ku tahay miisaaniyadda ama arday hadda ku bilaabanaya nashqadda dhijitaalka ah, Cintiq 16 ayaa adiga loogu talagalay.
Istuudiyaha Google Earth waa qalab animation cusub oo loogu talagalay sawirrada dayax gacmeedka iyo 3D
Istuudiyaha Google Earth waa aaladda cusub ee Google oo aad si fudud ugu samayn karto animations iyo fiidiyowyo aan caadi ahayn.
Opticia Sans waa isha qaab qoraal ee ka kooban shaxdaas indhaha ee dhakhaatiirta indhaha
Opticia Sans ayaa ah farta loo isticmaalo jaantusyada LogMAR ee lagu arko xarumaha caafimaadka indhaha. Nooc xarrago leh oo aad u gaar ah.
Waxaad layaabi doontaa sawirada taxanaha cusub ee uruurinta raashinka ay umuuqdaan kuwa gacanta lagu duubay.
Ma taqaan farshaxan yar? Farshaxaniistaha reer magaalka ah Fabián Marcel wuxuu awoodaa inuu ku sawiro sawiro yar yar ilbiriqsiyo kaliya. Raadi sida uu u sameeyo!
Sida iska cad waa kordhin loogu talagalay Chrome oo ka takhalusaysa dhammaan waxyaalahaas mashquulka ah ee aan ku yeelan karno degel markaan akhrino.
Farshaxanistahan reer Japan wuxuu u beddelaa sanduuqyada iyo baakadaha cunnada fudud farshaxanka
Kirigami waa farshaxanka jarista waraaqaha ee Japan iyo sida wanaagsan ee farshaxankan lagu magacaabo Haruki uu tusaale ugu yahay shaqooyinka noocan oo kale ah.
Maareynta midabka daabacaadda
Kahor intaanan u qaadin mashruuca ugu dambeeya saxaafadda, waa inaan fulinnaa maarayn midab wanaagsan. Waxaan kugula talineynaa qalabka qadka tooska ah si aad ugu badasho midabadaada.
Ku abuuri animations joomatari heer sare ah Motion iyo hal sawir
Dhaqdhaqaaqa waa barnaamij cusub oo web ah oo kuu oggolaanaya inaad ka sameysatid animations ama joomatari sawirro muuqaal ah hal sawir. Xal weyn.
Canvas waa barnaamij cusub oo Google ah oo loogu talagalay sawirro deg deg ah iyo xoqitaan
Dhammaan sawirrada lagu abuuray Google's Google Canvas waxay ku xirnaan doonaan koontada la xidhiidha, si aad uga sawiri karto meel kasta.
Sida looga saaro asalka sawir kasta 5 ilbidhiqsi iyo dadaal la'aan
Iyadoo la adeegsanayo sirdoon macmal ah websaydhku wuxuu awood u leeyahay inuu ku baabi'iyo asalka sawirka muddo ilbiriqsiyo ah. Guul
Ma rabtaa inaad asal noqotid? Kirismaskani haka laba labayn oo farshaxan sii. Haddii aad u baahan tahay dhiirrigelin, waxaan kaa caawin karnaa xulashooyin kala duwan oo kala duwan.
Qaar ka mid ah farshaxanno si weyn loogu dhisay kayn sida tii ay Anna u isticmaashay shaqooyinkeeda oo ku saleysan ulaha willow.
Si sanadka sifiican loogu dhammeeyo, ka jawaab 10 su'aalood si aad u ogaato waxa midabkaaga midabkiisu yahay 'Pantone' 2019 uu noqon doono.Hab xiiso leh oo wax lagu barto
Origami-kii cajiibka ahaa ee Cristian Marianciuc iyo wixiisii ​​cajiibka ahaa
Cristian Marianciuc wuxuu awood u leeyahay inuu sare u qaado heerka faahfaahinta si uu nooga tago jahwareerka ku yimid asalkaas uu ku abuurayo gacmihiisa.
Markuu aabbe u beddelo sawirrada la qoray ee carruurtiisa sawirro
Aabbahaani wuxuu lahaa fikrad weyn oo ah inuu dhiirrigelin ka helo carruurtiisa si uu u abuuro halyeeyo taxane ah Dhamaan guul.
Ku muujinta jaceylka aan u qabno mobilada farshaxan
Farshaxanistahan Ingiriisiga ah ayaa awood u leh inuu muujiyo waallida dunida badhkeed ay ku haysato taleefannadooda gacanta. Farshaxan karti u leh qabashada intaas oo dhan.
Awoodda cadayashada ee Sawirka
Fursadaha burushyada ku jira Sawirka Sawirka waa kuwo aan dhammaad lahayn. Waxaan ku sameyn karnaa sawir gacmeedyo layaableh aaladdan. Gaar ah ...
Nolosha Coral waa midabka Pantone ee 2019
Waxaan horey uheysanay midabka cusub ee 'Pantone' ee 2019 waana tan Living Coral. Sida sanad walba iyo sida ...
Fikradaha asalka ah ee calaamadeynta hadiyadaha kirismaska
Waxaa jira qaabab badan oo loogu calaamadeeyo hadiyadaha fasaxa. Waxaan ku baraynaa sumado badan oo kala duwan si aan qofna u qaldamin markii uu furayo hadiyadaha Ho, ho, ho!
Isku toosin sawirro badan si aad u abuurto fiidiyowyo wakhti ah si aad u ilaaliso waqtiga
'' Zoetic '' waxaad awoodi doontaa inaad la jaanqaadi karto sawirro isla markaana aad abuuri karto fiidiyowyo jadwal ah oo aad ku arki karto sannadaha carruurtaada dhaafaya ama sida dhismahaas loo dhisay.
Ku samayso sawirro dulinkaaga Humaaans ah adigoon wax fikrad ah ka haysan sawir
Humaaans waa barnaamijka shabakadda kaas oo aad ku abuuri karto sawirro dulinka ah ee dadka nooc kasta oo muuqaallo iyo animations ah. Bestial.
Sida loo duubo hadiyadaha Kirismaska
Kirismaska ​​waxaad hubisaa inaad hadiyado samayso. Haddii aadan aqoon sida loo duubo si ay u ekaadaan, waxaan ku baraynaa fikrado badan oo ku duub hadiyado qaab asli ah
Sawir laga soo qaaday gudaha dabka California
Berger wuxuu awoodaa inuu nagula yaabto sawiradaas oo muujinaya dhamaan argagax ay ahayd in maalmahaas lagu noolaado Kaliforniya.
DIY fikradaha boostada Christmas-ka
Ha u seegin mid ka mid ah caadooyinka ugu quruxda badan ee Kirismaska ​​fikrad la'aan. Waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo kaararka kirismaska ​​asalka ah si fudud.
Kirismaska ​​Freixenet ma laha goobooyin caan ah
Ogeysiisyada Kirismaska ​​ayaa la filayaa sanadka oo dhan. Soo ogow ololaha cusub ee Freixenet, oo ay ka go'an tahay inaadan tusin dad caan ah.
Astaamaha cusub ee Microsoft ee dib loo habeeyay
Haa, ugu dambeyntii waxaan dhihi karnaa dhowr bilood gudahood waxaan arki doonaa astaamaha cusub ee Microsoft Office ee dib loo habeeyay. Dhamaan wararka.
Mashiinka raadinta ee la cusbooneysiiyay Pantone si loo helo qiimayaal midab u dhigma
Haddii aad rabto inaad hesho midab gaar ah, ha moogaanin cusbooneysiinta ay fulisay Pantone oo leh mid ka mid ah qalabkeeda ugu fiican.
Iyadoo irbad iyo xariiq lagu barayo cilmiga xiddigiska ardaydiisa sanadkii 1876
Ellen Harding Baker waxay qaadatay 7 sano oo ay ku xardhay dhar gogol-xaadh ah oo ay hadhow ardayda ku bari doonto fasallo cilmiga xiddigiska ah. Cirbixiyeen weyn oo Mareykan ah.
Sawirka dhijitaalka ah ee Michal Sawtyruk ayaa lagu sameeyay Photoshop
Michal Sawtyruk waxay awood u leedahay inay na dhex marto muuqaalada bannaanka ee daadadku ka socdaan iftiin badan iyo dijitaalka ay Photoshop bixiso.
569 buugaag farshaxan oo bilaash ah ayaa laga heli karaa khadka tooska ah ee Madxafka Farshaxanka
Matxafka Farshaxanka ee Magaala-weynta ayaa soo rogay waxyaabo badan oo asal ah oo aad ku soo dejisan karto bilaash. Buugaagta farshaxanka marwalba.
Naqshadaha ugu hantida badan "California Crazy"
Waxay bilaabayaan daabacaad cusub oo ah "California Crazy". Buuggu wuxuu ururinayaa qaab dhismeedka ugu xad-dhaafka badan waddooyinka waaweyn ee Mareykanka. Daawo!
Waxaan baranay inaan sameysano jeesjeeskeena
Haddii mockups soo dejintu aysan waxtar kuu lahayn, waxaad isticmaali kartaa sawirradaada. Waxaan ku baraynaa inaad qalloociso sawirrada. Sii wad akhriska!
Farshaxan gacmeedka Louvre
Guusha Winged ee Samothrace waa mid ka mid ah khasnadaha Louvre taasina waa mid gaar ah sabab gaar ah oo aan kuu ogeysiinayno.
Magaalooyinka loogu raadinta badan yahay hal-abuurrada
Weligeen ma isweydiinay haddii xaafadaha casriga ahi lumiyaan nuxurkooda? Maqaalkani wuxuu soo bandhigayaa xaqiiqada qaybaha hal abuurka.
LEGO wuxuu u dejiyaa dadka waaweyn sidaasna ku nasto
LEFO FORMA waa soo jeedinta cusub ee nooca toy-ka ee loogu talagalay dadka waaweyn inay qaataan daqiiqad nasasho ah maalin kasta.
Tani waxay noqon laheyd qalabka 80s ee barnaamijyada ugu caansan xilligan
Spotify, Instagram ama Netflix waa qaar ka mid ah astaamaha lagu arki karo isbadalkan ku yimid aaladaha ugu caansan 80s.
Farshaxanka wadada, fariimaha qasacadaysan
Fanku xad ma leh, hal tusaalena waxaa laga helaa daasadaha ay rinjiyeeyeen laba farshaxan oo ka socda Barcelona. Waxay ku qoraan dhambaallada jacaylka daasadaha.
Microsoft waxay abuurtaa Sirdoon Artifishal ah oo sameeya muuqaalka muuqaalka wajigaaga
Microsoft waxay ka shaqeysaa Sirdoonka Artifishalka oo sawiraya sawirada muuqaalka sawirada. Goor dhow ayaan la imaan doonaa kuligeen.
Wacom waxay soo bandhigeysaa qalinkeeda cusub ee Cintiq Pro 32 qalinjebinta xirfadlayaasha qaabeynta
Cintiq Pro 32 oo ka socota Wacom waa kormeeraha is-dhexgalka ee cusub oo aad si raaxo leh ugu soo jiidan karto iyada oo ay ugu wacan tahay goobta shaqada ee weyn.
Sida loo saxo aragtida Photoshop
Haddii aad leedahay sawir qalloocan aragtida sawirka awgeed, sii wad akhriska maxaa yeelay waxaan kuu sheegaynaa xalka. Waxaad u baahan tahay oo keliya Photoshop.
Sawirka Vivian Maier ayaa soo shaac baxay markii ugu horeysay
Waxa kale oo jira bandhig Vivian Maier ah oo ka socda magaalada New York illaa Janawari 9, 2019. Sawir qaade aan hadda ku aragno midab.
80 milyan oo euro qiimaha lagu gaadhay shaqo uu qabtay David Hockney oo xaraash ah
David Hockney waa mid ka mid ah fanaaniinta nool ee sumcadda leh. Mid ka mid ah shaqadiisa wuxuu gaarey $ 80 milyan kooxda Christie
Jimcaha Madow wuxuu garaacay qolalka farshaxanka
Jimcahaani wuxuu imanayaa "Black Friday" caanka ah iyo qolalka farshaxanka ee Catalan waxay ku biirayeen dadaalka sanado. Hore u soco oo sii fanka!
Isagoo jira 96 ​​sano, wuxuu rinjiyeeyay mid kasta oo ka mid ah guryaha ku yaal magaaladiisa si uu uga badbaadiyo duminta
Adkaysigiisa iyo dulqaadkiisa awgeed, Huang wuxuu awood u yeeshay inuu dowladda ka hor istaago inay dumiso magaaladiisa maadaama dhammaan guryaheeda la rinjiyeeyay.
Alphabet of Rock, waa buug si fiican loo sawiray oo leh dhammaan halyeeyada noocyadan muusigga ah
Rock Alphabet waa buug sawir leh oo xaraf kasta oo alifbeetadu leeyahay mid ka mid ah halyeeyada noocaan muusikada weyn.
Ku guuleysta Absolut Hal-abuurka Tartanka oo ku guuleysato 20.000 euro
Hadaad nafsadaada u hurto sameynta fanka, kaqeyb gal tartanka cusub ee Abolsut Vodka. Waa inaad u abuurtaa ololaha cusub ee astaanta, abaalmarinta waa € 20.000.
Pudding wuxuu ku arkaa 3D xaddiga dadka ku nool aag kasta oo adduunka ka mid ah
Pudding waa websaydh si dhakhso leh u qiyaasaya tirada dadka ku nool aag taas oo ay ugu mahadcelinayaan garaafyadeeda fudud iyo saamaynta sare leh.
Sawir qalin qalin leh oo layaableh oo laga sameeyay albaab ku yaal Cathedral-ka Milan
Kaniisadda Milano ee Milano waa sheyga lagu barto gacanta farshaxankan oo qalinkiisa ku raadiya xaqiiqo dhan. Shaqo yaab leh.
Klein's cajiib ah «Montage Puzzles»
Klein Montage Puzzles waxay isku daraan sawirro kala duwan si loo abuuro xujooyin daandaansi, asal ah iyo hal abuur leh. Maxay noqon laheyd hadiyad weyn.
Guuldarro awgeed Adobe wuxuu tirtiraa 100.000 oo faylal naqshadeeye
Wuxuu dacweeyay Adobe qalad xun oo ku guuleystey inuu kumbiyuutarka ka tirtiro 100.000 oo fiidiyoow iyo muuqaal ah.
Sawirada cajiibka ah ee Jupiter ee baaritaanka NASA ee Juno nagu soo laabanayo
Jupiter waa meere aan aad loo aqoon, Juno-na wuxuu ku siinayaa muuqaal muuqaalo sawiro layaableh oo ka yimid meeriskeeda.
Dhakhaatiirta UK waxay qoraan farshaxanka iyo dhaqanka si loo wanaajiyo caafimaadka maskaxda iyo jirka ee bukaanka
Dhakhaatiirta ku nool Boqortooyada Midowday (UK) waxay bilaabi doonaan inay kuu qoraan habka cuntada ee aad ku qaadan karto fasalada sawirada, tagto bandhigyada ama bilaabi doonto casharo riwaayadaha.
Farshaxanno badan oo farshaxanno ah ayaa u ammaanaya halyeeyga buugga majaajillada ah Stan Lee
Waxaan la wadaagi doonnaa sawirro iyo sawirro badan fanaaniin fara badan oo ku soo biiray siinta sharaftooda gaarka ah Stan Lee.
5 midab si loo ogaado tayada nafaqada ee sheyga
Midabkani wuxuu bixin doonaa qiimaha nafaqada ee badeecada cuntada ee laga iibsanayo Spain. Qiyaas ay qaadatay Wasaaradda Caafimaadka.
Fanaaniintu waxay xushmeeyaan Stan Lee oo shalay naga tagay
Shalay Stan Lee-kii weynaa ee ka socday Marvel ayaa weligiis naga tagay, in kasta oo dhaxal weyn oo hadhay uu inala sii socon doono muddo dheer.
Color Leap, ama ku soco taariikhda iyada oo leh midabkeeda midabbada kala duwan
Color Leap-ka ayaa awood kuu leh inuu kugu dhex mariyo xilliyo kala duwan oo taariikhi ah si aad u ogaato kuwee ugu caansanaa midabbada midabka loo adeegsaday.
Ka soo dejiso 40.000 faylalka farshaxanka Machadka Farshaxanka ee Chicago
Haddii aad dareento inaad wax soo dejineyso, hadda waxaad ka heli kartaa dhammaan ururinta dhijitaalka ah ee Machadka Farshaxanka ee Chicago oo ay la socdaan shaqooyinka Monet iyo kuwo kaloo badan.
Trick si aad u abuurto qoto dheer Sawirka
Nuqul fudud iyo dhajiska dhajiska ayaa kuu oggolaanaya inaad ku darto kakanaanta iyo qoto dheer dhammaan waxyaabaha aad abuurto adoo adeegsanaya Adobe Illustrator.
Jamboard, Google iyo BenQ tooyga qaaliga ah ee kooxaha shaqada dijitaalka iyo shirarka
Jamboard waa aalad cusub oo ka socota Google iyo BenQ oo loogu talagalay kooxaha shaqada, ha ahaato shirkad, qolka wararka ama jaamacadda.
Sawirada cajiibka ah ee sawirada lama degaanka Namibia
Saxaraha Namibia waa isha dhiirrigelinta sawir-qaadaha iyo farshaxanistaha Australiyaanka ah ee ina tusaya aragti kale oo aragti ah.
Marka sawirku leeyahay wax ka badan indhaha
Craig Alan waa farshaxaniste waqti ku bixiya sameynta sawirro taxane ah oo fiiro gaar ah u leh faahfaahinta.
Si dhakhso leh u samee astaamo vector-muuqaal aad u qurux badan oo caawimaad ka helay Marc Edwards
Dhowr ilbiriqsi gudahood waxaad ku heli kartaa taxane ah astaamo vector si qurux badan loo qaabeeyey oo ay la socdaan Adobe Illustrator. Edwards ayaa na baraya.
Tokyo sixir iyo jiilaal leh sawirka Yuichi Yokota
Yuichi Yokota wuxuu soo bandhigayaa taxanahan sawirradiisa ah ee Tokyo bartamihii jiilaalka oo baraf barafku ay yihiin halyeeyada.
Aabaha internetka wuxuu doonayaa inuu ku keydiyo shabakada 'Magna Carta'
Sir Tim Berners-Lee wuxuu bilaabayaa olole #ForTheWeb si loo badbaadiyo internetka oo looga dhigo wax caadi u ah qof walba oo meerahan ku nool.
4 Kaamirooyinka Milleniyamka ee sawirada harada Tahoe muddo 1.000 sano ah
Faylasuuf Keats ayaa bilaabay mashruucisa 4 kamaradood ay ku muujin doonaan waqtiga iyo isbadalka meeraha kun sano.
Farshaxaniste ayaa dib ugu soo koobay Pokémon sida abuurka dhabta ah natiijaduna waa mid cajiib ah
Joshua waa farshaxan yaqaan u diyaar garoobay inuu dib uga fikiro dhammaan kuwa Pokémon ee soo buuxiya xaqiiqooyinka la kordhiyay iyo ciyaaraha tacsida.
PIXL, ama dib u qeexida «LEGO» mustaqbalka
Ku dhis wax kasta oo aad ka fekeri karto baloogyada 'PIXL' ee ku xidhan kuwa kale adoo adeegsanaya hab magnet qaab sixir ah.
158 emoji cusub oo ay ku dartay Apple: madax casaan, superheroes iyo kuwo kale
Emoji cusub si loogu kiciyo bandhigga wada sheekaysiga wada sheekaysiga iyo fariimaha shabakadaha bulshada ee ka socda iPhone ama iPad oo wata iOS 12.
IPad-ka cusub ee cusub ee loo yaqaan 'iPad Pro 2018' oo ah kiniin cusub oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha
Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa 878 iyo 2099 euro oo loogu talagalay iPad-ka cusub ee 2018 ee loogu talagalay kiniin dhammaystiran oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha aan eegin qiimaha.
Apple waxay dib u naqshadaynaysaa astaanteeda dukaankeedii ugu horreeyay Thailand
Dad badan ayay layaab ku noqotay, Apple waxay dib u naqshadeysay astaanteeda si loogu xoojiyo midab dahabi ah iyo taariikh madow oo tilmaamaysa inay casriga tahay.
Brana waa farshaxaniste Faransiis ah oo male-awaalkiisa ay ku noolyihiin bahallo aad u tiro badan, oo ka muuqda sawirradiisa.
Sawirada Bopp ee dariiqyada si loo ilaaliyo dhaqanka bulshada
Sawirada lagu xardhay jidadka magaalada sida Los Angeles waxay muujinayaan dhaqanka dhaqanka bulshooyinka kala duwan.
Nibir weyn oo 32-mitir ah oo ka sameysan warqad Nahoko Kojima
Si loo qaado Nahoko Kojima whaharkeeda weyn ee 32-ka mitir ah, waraaqda waa in lakala saaraa si loo duubo oo loo qaado Thailand.
Waxaan baranay sameynta GIF-ga Photoshop
Haddii aad rabto inaad abuurto nuxurka socdaalka, waxaan ku tusi doonnaa hab dhakhso leh oo sahlan oo aad ku sameyso. Soo ogow talaabo talaabo ah sida loo abuuro GIF leh Photoshop.
Dran, farshaxanka waddada waxay ugu yeeraan 'Faransiiska Banksy'
Graffiti waa wadada loo maro cambaareynta bulshada isla wadadaas. Isticmaalka Dran waa meel bannaan oo lagu sheegto xuquuqda aadanaha isla markaana si furan loo dhaleeceeyo.
Sawirada kicinta leh ee nolosha casriga ah ee uu soo saaray Sergio Ingravalle
Ingravalle waa sawirqaade Jarmal ah oo leh taxane sawirro ah oo aragti kale ka bixinaya nolosha casriga ah maanta.
Khadadka toosan ee dabeecadda: NASA waxay ka heshay baraf xagal leh oo ku yaal Antarctica
Khadadka toosan ee balaadhinta balaaran ee barafka leydilaadka ee xukunku dhigayo oo kaliya gacanta nin ee abuureysa xariiqyo toosan.
Talooyin ku saabsan vector ahaan astaamaha
Tilmaamaha si loo kala shaandheeyo astaanta ama sawirka loona kordhiyo waxtarka habka naqshadeynta iyo digitationynta, si kuwa kale ay iyaguna uga faa'iideystaan.
Soo dejiso oo soo daabac sawirada 'Affinity Photo iyo Publisher' oo gaagaaban
Sawirka Affinity iyo Naqshadeeyaha ayaa ah laba barnaamijyo naqshad weyn oo badal dhab ah u ah Photoshop iyo Illustrator. Ku soo dejiso faafaahinta qaabab toobiye ah.
Kiniiniyada garaafyada ugu fiican
Liis ka mid ah kiniiniyada garaafyada ugufiican si aad fikrad fiican uga hesho waxa soo socda ee aad iibsan doontid ay noqon doonaan Jimcaha Madow ama dhacdo kale oo iib ah.
Xayaysiiskaagii ugu horreeyay ee Instagram
Xayeysiisyada 'Instagram' ayaa noo oggolaanaya inaan ku qaadno ololeyaal qaab fudud oo jaban. Waxaan kuu sheegeynaa saldhigyada si aad awood ugu yeelatid xayeysiintaada ugu horreysa ee guuleysata.
Farshaxaniste ayaa soo qabtay sixirka dukaamada yar yar ee Kuuriyada Koonfureed
Farshaxaniste u dhashay Kuuriyada Koofureed oo la yiraahdo Me Kyeoung Lee wuxuu tarjumayaa dukaamadaas xaafadaha inta nool oo ku baaba'aya acrylics-keeda.
Qaabdhismeedka gaarka ah ee naqshadeeyaha reer Japan ee Tadao Ando
Tadao Ando waa naqshadeeye awood u yeeshay inuu noloshiisa ku gaaro barashada dhismaha qaab iskiis wax u baray. Dhiirrigelinaya